रुपा रानाको आरोप : नयाँ पुस्तामा रेस्पेक्टको कमी | News Filmy
अन्र्तवार्तामा यस्ता यस्ता विचार
यसै साता प्रकाशित भएको पत्रिका फिल्मीखबर साप्ताहिक संगको कुराकानीमा रुपाले नयाँ पुस्तामा रेष्पेक्टको कमी रहेको भनी अन्र्तवार्ता दिएकी छिन् । पछिल्लो समय चलचित्र बिकास बोर्डकी सदस्य पदमा रहेर दैनिकी चलाईरहेकी रुपाले अन्र्तवार्ताका क्रममा आफ्ना विभिन्न भनाई पनि राखेकी छिन् । पढ्नुस् ।
आजकाल के गर्दै हुनुहुनछ ?
आजकाल चलचित्र विकाश वोर्डको सदस्यका हैसियतले यस सम्बन्धी कार्यहरुमा नै आफुलाई व्यस्त बनाइरहेकी छु । साथै अन्य कार्यहरुमा पनि आफुलाई संलग्न गराउदै आएकी छु । चलचित्र विकास वोर्डमा रहेका विभिन्न समिति हरु मध्ये चलचित्रकर्मी महिला शसक्तिकरण समितिको म संयोजक रहेको हुनाले त्यस सम्बन्धि कार्यहरुमा पनि संलग्न रहेकी छु । यस समितिको नयाँ कार्य समिति चयन पनि गरिएको छ । यसले विभिन्न कार्यहरु गर्ने योजना हामी बनाइ रहेका छौ । यसको कार्य योजनाहरु सार्वजनिक भए पछि तपाईं थाहा पाइहाल्नु हुन्छ । त्यस्तै चलचित्र विकास वोर्डको सदस्यता पूर्णता नभएका कारण यसका कार्यहरु अगाडी बढ्न सकेको थिएन । अहिले यसको पूर्णतासँगै कार्यहरु अगाडी बढाउने गृहकार्य भएको छ । यसको सदस्यमा सुरेश दर्पण पोख्रेलको नियुक्तिसँगै अब कार्यहरु अगाडी बढाउने सहज हुने महसुश गर्दै छौं ।
पहिलेको फिल्म उद्योग र अहिलेकोमा कस्तो फरक पाउनुहुन्छ ?
फिल्म उद्योग अहिले पहिला भन्दा प्राविधक रुपमा धेरै अगाडि बढेको छ साथै सफल पनि देखिन्छ । हाम्रो समयमा क्वालीटीमा बढी ध्यान दिए जस्तो लाग्थ्यो भने अहिले क्वालीटी भन्दा पनि क्वान्टीटीमा बढी ध्यान दिन थालिएको हो कि भन्ने महिले महसुश गरेकि छु । पहिला जस्तो अथवा हाम्रो पालमा भनौ कलाकारहरुको जुन एउटा क्रेज थियो अर्थात रेस्पेक्ट थियो त्यो नयाँ पुस्तामा कतै कमि छ कि जस्तो लाग्छ । नेपाली फिल्म निर्देशन र अभिनयमा भने खासै फरक भएको पाउँदिन म । हामीले सोलोलाइडमा काम गर्‍यौ भने अहिले डिजिटलको युग छ जसले काम गर्न पनि धेरै सजिलो बनाएको छ ।
तपाईंको पालमा फिल्मले सिल्वर जुब्ली, गोल्डेन जुब्ली मनाएका न्युजहरु धेरै आउँथे अहिले त्यस्तो मनाएको पाइदैन नि ?
हो हाम्रो पालका धेरै फिल्मले त्यस्तो मौका पाउँथे । मैले खेलेका फिल्महरु चोट, विजय पराजय, चट्याङ लगायतकाले पनि त्यस्तो मौका पाए । त्यतीवेला फिल्महरु कम पनि बन्थे र राम्रा पनि । कथा वस्तु अनुसार कलाकारहरुको छनौट हुने गरदथ्यो । अहिले कता कता कलाकार भन्दा पनि प्रविधिलाई बढी जोड दिएको हो की, फेरि यस सम्बिन्धि अध्ययनको पनि कमी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई । विशेष नयाँ निर्देशकहरु अध्ययन नगरी आउँछन र फिल्मबाट रिटन नआए पछि फिल्म उद्योग नै खतम छ भन्ने गरिन्छ जसले यसक्षेत्रलाई नकारात्मक असर पारेको छ । त्यसो त केही नयाँ फिल्मनचलेका पनि होइनन चलेका छन् । राम्रो कथा वस्तु, राम्रो कलाकारहरु र राम्रो निर्देशनमा बनेका फिल्महरु जहिले पनि चल्छन ।
महिला कलाकार विनाको फिल्म कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो नेपाली फिल्म उद्योगमा महिलाको स्थान कहाँ पाउनु हुन्छ ?
राज्यले महिला र पुरुषको स्थान बराबर भने पनि व्यवहारमा त्यस्तो कही कतै पाइदैन । फिल्म क्षेत्र पनि त्यस्तै हो । अन्य क्षेत्रमा त महिलाको स्थान सुरक्षित छैन भने फिल्म क्षेत्रमा सुरक्षित हुने कुरै भएन । यो क्षेत्रमा महिलाहरु बढी पिडित भएको म पाउँछु । उनीहरुको कुराको सुनुवाई हुने ठाउँनै छैन । सोमबार मात्रै हाम्रो फिल्मकर्मी महिला शसक्तिकरण समितिमा पनि यो कुरालाई कसरी अगाडी बढाउन सकिन्छ भनेर छलफल भएको थियो । हामी के निर्षकसमा पुगेका छौ भने फिल्म क्षेत्रमा कार्य गर्ने महिलाहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न पहल गर्ने, महिला हिंसा तथा विभिन्न किसिमका शोषण विरुद्ध विभिन्न सरोकारवाल संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य गरी समस्या समाधानको लागि पहल गर्ने, फिल्म क्षेत्रमा महिलाहरुले भोग्नु परेको समस्याहरुको पहिचान गर्ने, महिला माथि हुने गरेका अन्याय, अत्याचार विभेद विरुद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, महिला चलचित्रकर्मीहरुको शसक्तिकरणका लागि विकास बोर्डलाई नीतिगत सुझाव दिने, महिला माथि हुने अन्याय, अत्याचार विभेद विरुद्ध बन्ने फिल्महरुको निर्माण गर्न प्रोत्साहित गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आयोजना हुने फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रमहरुमा नेपालबाट सहभागिता हुने अनिवार्य रुपमा महिला फिल्मकर्मीहरुलाई सहभागिता गराउन आवश्यक व्यवस्था गर्ने लगायतका कुराहरुलाई मागहरुलाई सम्बन्धित निकायहरुमा लागुगर्नका लागि जोडतोडका साथ उठाउने ।
राज्यले कलाकारलाई के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईंलाई ?
हाम्रो उद्योगको संम्रग कलाकारको कुरा गर्नु पर्दा आर्थिक हिसावले कतिपय कलाकारको आर्थिक अवस्था नाजुकन नै छ । त्यसलै सम्पूर्ण कलाकारको लागि राज्य उचित संरक्षणको व्यवस्था गर्नु आवयश्यक छ । जसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कलाकारीतामा नै बितायो त्यसलाई राज्यले उचित सम्मान, भत्ता वा पारिश्रमिक अथवा जीवोकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । आफ्नो सम्पूर्ण जीवन कलाकारितमा विताएर वृद्ध अवस्थामा पुगका राष्ट्रका गहना भनिएका लाई छुट्टै वसो वासको व्यवस्था राज्यले मिलाउनु पर्दछ । चलचित्र विकास वोर्डले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका फिल्म क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबैलाई न्यूनतम आर्थिक भत्ताको व्यवस्था गरेपनि त्यो रकम प्रर्याप्त छैन उनीहरुलाई थप सुविधाको आवश्यकता भएको हामी सबैले महसुस गरेको कुरा हो । जसमा सम्बन्धि निकायको ध्यान जान जरुरी छु ।
एउटा फरक कुरा, तपाईले खेलेका फिल्म मध्ये ‘विजय पराजय’को बेड सिनको चर्चा पछि सम्म भयो यसले तपाईंको व्यक्तिगत जीवनमा कतिको असर पर्‍यो ?
हो मैले खेलेका फिल्म मध्ये विजय पराजयको एउटा बेड सिनले निकै चर्चा पायो त्यती वेला । त्यो चर्चा पछि सम्म पनि भयो । त्यो फिल्मको कथा वस्तुअनुसार नै थियो अनावश्यक थोपरिएको दृश्य थिएन । जहाँसम्म तपाईले सोधेको मेरो व्यक्तिगत जीवनको कुरा हो त्यो सिनले पछि सम्म ए यस्तो भन्ने भएको थियो अवस्य पनि । तर वास्तवमा त्यो फिल्मको एउटा स्कायन्डल मात्र थियो ।
नेपाली चलचित्र उद्योगको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक छैन । यो चलचित्र उद्योग लाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाउने जिम्मा तपाईं हामीहरुकै हो । यसमा संलग्नहरुकै हो । म तपाईंको मिडिया मार्फत के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यसलाई मर्यादित र व्यवसायिक बनाऔँ र त्यतिकै यस क्षेत्रमा हाम फाल्नु भन्दा जानेर बुझेर र केही सिकेर मात्र आउन आग्रह गर्दछु ।
साभार : फिल्मीखबर साप्ताहिक : प्रस्तुती गिता अधिकारी